Wiase Nsɛm | Nyan! April 2014
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Maltese Norwegian Oromo Pangasinan Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Xhosa Zulu
Wokɔ California kuropɔn Los Angeles a, seesei wɔama traffic light 4,500 a ɛwɔ hɔ nyinaa yɛ adwuma bom; sɛ ɛha sɔ kɔkɔɔ a na baabiara asɔ kɔkɔɔ. Kuro no tenten ne ne tɛtrɛtɛ yɛ akwansin 469 (kilomita 1,215), na nkanea no apete kuro no mu baabiara. The New York Times atesɛm krataa no ka sɛ Los Angeles ne “kuropɔn a edi kan wɔ wiase nyinaa a wɔadi kan ayɛ saa.”
Apɔwmuden asoɛe no ahwehwɛ mu ahunu sɛ efi afe 1990 kosi afe 2010 no, nnipa a wɔayɛ kɛse aboro so no dodow kɔɔ soro ɔha mu nkyem 82. Ɛwom sɛ aduane a nnipa nnya nni wɔ aman pii so ha adwene deɛ, nanso kɛseyɛ mmorosoɔ kunkum nnipa kyɛn ɛkɔm. Wɔkyerɛ sɛ, ɛkɔm kum nipa baako a, kɛseyɛ mmorosoɔ kum nnipa mmiɛnsa ne akyire. Nhwehwɛmufo panin bi a yɛfrɛ no Majid Ezzati ka sɛ, sɛ wohwɛ mu a, “mfe 20 a atwam ni, na nnipa di kɔm. Nanso seesei aduane abu so ama nnuane basabasa nso adɔɔso wɔ aman a afei na wɔrefifi sẽ mpo mu. Eyi de yareɛ abrɛ yɛn.”
Wɔahu suborɔkokɔ bi wɔ supɔw yi so. Wɔkyerɛ sɛ “wakyɛ sene anomaa biara wɔ wiase.” Wato nkosua asan ahwane bio. Wadi mfe sɛn? Afe 1956 na nyansahufo de ahyɛnsode taree ne ho; saa bere no na wadi bɛyɛ mfe nnum. Enti seesei wadi boro mfe 60. Ɛde besi saa bere yi, anomaa yi atwa kwansin ɔpepem mmienu kosi ɔpepem mmiɛnsa (kilomita ɔpepem 3 kosi 4). Eyi te sɛ nea obi fi asase so akɔ bosome so aba saa ara mpɛn nnan kosi nsia.
Nnipa bi ayɛ nhwehwɛmu ahu sɛ wuyi South Africa mmaa mmiɛnsa biara a, emu baako pɔ ne ho. Nku ne samina a wɔde pɔ wɔn ho no tumi di awu paa, enti aman pii abara. Yareɛ a ɛde ba no bi ne, kokoram, adwenemhaw, nsãã ne nansoɔbɛn. Etumi sɛe asaabo nso.
Wiase Nsɛm—April 2014